Dani Alves Oo Ka Hadlay Hadii Neymar Jr Ay Dhutin Doonan Kulanka Ay Caawa Balansan Yihiin Real %
Ciyaaryahanka daafaca dambeedka midig uga cayaara PSG, wiilka lagu magacaabo Dani Alves ayaa wuxuu aaminsan yahay in diyaar garowga kulankii hore uu ka duwan yahay kan caawa ee lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League.
Alves oo si fiican ugaranaya muuqaal ciyaareedka Real Madrid, maadaama uu horey Barcelona ugu soo dheelay ayaa wuxuu ku goodiyay in Los Blancos ay kala diri doonan, iyagoo uusan garoonka ugu jirin sida uu yiri, Neymar Jr.
Neymar Jr, ayaa wuxuu ciyaartaan ku seegi doonan kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray Lugta midig, gaara ahaan Canqowga isagoona lagu sameeyay Qaliin, wuxuuna garoomada ka maqnaan doonan inta ka dhiman fasal ciyaareedkan.
“Waxaan haysanaa 90 daqiiqo oo aan wax walab ku sameyn karno, waxaana aaminsanahay inaan ka duwan nahay sida lugtii hore, maxaa yeelay waxaan hada nahay kuwa haysta dhiiro gelin badan,” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Alves.
“Waxaan awoodi karnaa inaan gaarno wareega Sideed dhamaadka, inagoo aanan haysan Neymar, maxaa yeelay waxaan haysanaa ciyaaryahano kale, kuwaasoo dookha labaad noo ah, si fiican uyaqaan Champions League,” ayuu raaciyay.
“Waan ognahay in maqnaanshaha Neymar inay tahay mid xun, waana mid aan macquul ahayn inaan tabi weyno, laakiin waa inaan soo dookhanaa kuwa kale, waliba kuwa aan aaminsahay inay wax badan na caawin karaan,” ayuu hadalkiisa kusoo xiray.
Dani AlvesPSG vs Real Madrid
Casamiro Oo Ka Digay Halista Ka Imaan Karta Di Maria Marka Ay Caawa La Dheelayaan PSG